Ovao ny fisehoana amin'ny KDE miaraka amin'ny QTcurve | Avy amin'ny Linux
Tesla | | Fisehoana / personalization
Androany aho tonga mba hanao an'ity lesona kely ity momba ny fandaminana ny endrika ivelany KDE ary hazavao, araka izay tratra, ny firafitra izay KDE ampitahaina amin'ny tontolo iainana GTK.
Mpampiasa maro rehefa mizaha toetra KDE maneho hevitra fa sarotra ny mametraka sy / na manamboatra ny lohahevitra amin'ny birao. Ao amin'ny tontolon'ny birao toa ny XFCE na, ilay efa ho lany tamingana, Gnome 2 ilay zavatra dia tena tsotra: misintona lohahevitra iray, esory izy ary afindrao amina fampirimana sasany amin'ny rafitra.
Tsy izany no ao KDE, ary ny marina, olona maro ao anatin'izany ny tenako, tsy nanana ny fomba fanovana lohahevitra iray izahay. Vao haingana, nanao ny dingana aho nanomboka tamin'ny XFCE ka hatramin'ny KDE amporisihan'ny fanehoan-kevitra sy lahatsoratra ato amin'ity bilaogy ity izay nanandrana nanandrana aho.
Noho izany dia voatery nanery ny tenako hianatra ny fanovana ireo lohahevitra aho avy eo dia hiezaka ny hanazava ireo zavatra azoko natao mba tsy ho azoko. Ho an'ity fampianarana ity dia hampiasa ny haingo amin'ny varavarankely izahay Qtcurve ho an'ilay ampiasako izao. Na izany aza, ny fizotran'ny haingon-trano hafa dia tsy ho samy hafa be.
Andao àry hanomboka!
Ny zavatra voalohany dia ny maneho hevitra kely momba ny firafitry ny lohahevitra ao amin'ny KDE. Ireo dia:
Lohahevitry ny desktop Plasma. Izany hoe, ny lohahevitra hananan'ny birao, azy gadget, baoritra sy ny menio ao aminy
Mpanaingo varavarankely. Hevitra ho an'i Kwin. Amin'ity tranga ity dia hampiasainay Qtcurve.
Fomban'ny fampiharana. Hanova ny fisehoan'ny Qtcurve amin'ny fampiasana rakitra .qtcurve.
Drafitra loko. Araka ny tondroin'ilay anarana, io dia mitana ny loko isan-karazany ao anatin'ny fampiharana: ny lokon'ny endritsoratra, ny lokon'ny loko, ny loko misongadina, sns.
sary Masina. Tantano ny lohahevitra kisary.
Fisehoan'ny GTK. Ho antsika izay tia fampiharana GTK sasany ary miahy ny amin'ny endrik'izy ireo ambany KDE
Raha vantany vao nodinihinay ny paikady fototra izay narahin'ny lohahevitra iray tao amin'ny KDE, dia ho hitantsika ny fanovantsika ny lafiny tsirairay. Hanomboka amin'ny Qtcurve. Mametraka izay ilainao amin'ny Debian sy ny derivatives:
Araka ny hitanao dia misy koa fonosana hanatsarana ny fisehon'ny rindranasa GTK. Vita izany dia hataontsika System Préférences -> fisehoana amin'ny sehatr'asa -> haingon-trano ary eo no mijery Qtcurve. Amin'izao fotoana izao dia hiova ny sisin'ny varavarankely ary toa hafahafa. Aza manahy fa izao isika mamaha azy.
Ny dingana manaraka aorian'ny fikandrana dia mampiasa haingon-trano Qtcurve mitadiava lohahevitra (* .qtcurve fisie) sy ny teti-doko (* .file loko). Ho an'ity dia afaka mankany isika KDE-Jereo na deviantART ary safidio izay tiantsika indrindra. Raha ny tena manokana dia nisafidy iray aho manana endrika ivelany, satria io no akaiky indrindra hitako tamin'ny lohahevitra greybird nampiasako tao amin'ny XFCE.
Raha vantany vao alaina ny lohahevitra iray, amin'ny ankapobeny dia hanana rakitra roa isika: ny iray misy a.qtcurve ary ny iray hafa misy fanitarana.loko. Hampiasa azy ireo isika dia handeha System Préférences -> fisehoan'ny App -> Style.
Amin'ity fotoana ity dia hampiasa ny menio drop-down isika hisafidianana Qtcurve, ary hampiasa ilay safidy isika Napetraka hiditra amin'ny safidin'ny Qtcurve. Amin'izao fotoana izao dia manome izahay Import ary izahay mitady ilay rakitra .qtcurve hampiasana azy.
Avy eo ny loko loko. Ao anaty menio Fisehoan'ny fampiharana, mifidy ny kiheba izahay loko. Hitanay ny safidy ahafahantsika manafatra loko loko: Manafatra schema. Izahay dia mitady ilay rakitra .colors izay nakarinay ary hanana lohahevitra mirindra kokoa na tsy mifanaraka.
Saingy, mbola tsy nanao na inona na inona tamin'izany izahay Lohahevitra Plasma, kisary ary fampiharana GTKAndao ary!
Raha ao anaty menio Fisehoan'ny fampiharana Mandeha amin'ny tabilao Ikona izahay ary hahita safidy iray izany Mametraha rakitra lohahevitra. Ity safidy ity dia hitondra antsika amin'ny fisafidianana loha-hevitra kisarisary izay nalainay teo aloha.
Mikasika ny fisehoan'ny GTK, amin'ny fomba mitovy amin'ny tabilao ho an'ny sary masina, dia misy iray hafa ho an'ny GTK. Manantona azy izahay ary afaka miditra ao anatiny dia afaka misafidy ny lohahevitra hampiasaina ary koa ireo sary masina, endritsoratra ary ny hafa. Misafidy ireo sary masina mitovy amin'izany izahay sy ao anatin'ilay lohahevitra Qtcurve.
Mba hamaranana dia mila mifidy zavatra tsara fotsiny ianao Lohahevitra Plasma, izay nakarinay avy tao amin'ny tranonkalanay lohahevitra ankafizinay, ary namoaka azy ity:
Fa safidio avy eo avy eo: System Préférences -> Workbench Appearance -> Desktop Theme.
Ary amin'izany no nahavitanay! Araka ny efa hitanao, dia mety tsara ny mety ho fanaingoana. Na dia toa somary manahirana aza izany amin'ny voalohany, amin'ny farany dia zatra azy io ary manova ny lohahevitra mihitsy aza mba ho tonga lafatra.
Miarahaba ary manantena aho fa manampy anao hanatsara ny birao ity !!
Satria ny fiteny misy ny birao misy ahy dia tsy Espaniôla, mety tsy hitovy ny anaran'ireo faritra samihafa. Na izany aza, misy ny sarin'ny dingana sarotra kokoa na mety tsy ho intuitive.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ovao ny fisehoana amin'ny KDE miaraka amin'ny QTcurve
Mampalahelo fa tsy mifanaraka amin'ny gtk3 ny qtcurve, manantena aho fa tsy handefa firefox sy chrome ho gtk3 xD ry zareo fa tapitra ny varotra.
Niverina tany amin'ny Oxygen aho, satria manana fanohanana ny GTK2 sy GTK3.
Ary mbola ao amin'ny Oxygen aho ary mandeha tsara ny zava-drehetra. Andao hojerentsika raha azoko atao ny manova ny kisary mampihena, mampitombo ary manidy ireo izay ananan'ny Elementary (izay, tsara tokoa).
Apetrako izy ireo zukitwo ary faran'ny tantara xD na orta izay misarika ihany koa xD na dia mikasika ny baoliko aza izany dia sarotra be ny manova ny lokon'ny lohahevitra gtk ¬¬, mila manova rakitra aho raha toa ka milay ireo toe-tsaina ireo dia apetaho ireo loko izay Napetrako fa tsy ¬¬,
Tss !! Tete Plaze ianao dia eo amin'ny tsipika mitovy amiko foana, avelao ny sendra ny hevitra ao anaty iray amin'ireo very.
Tsy tokony te-hanohana gtk3 izy ireo satria ny gnome dia manova azy isaky ny kinova XO
Ny nataoko tamin'io lohahevitra io, satria mampiasa KDE aho fa fampiharana gtk3 sasany, dia ny mampiasa lohahevitra antsoina hoe adwaitish ho an'ny qtcurve, ka dia tena tsara izany.
ROBOSapiens dia hoy izy:
Ary aza hadino ny mangarahara, ampiarahina amin'ireo loko namboarina, hatsaran-tarehy!
Saingy, amin'ny vidiny izay tsy hahitana ireo topi-maso amin'ny horonantsary, ho fanampin'izany, tsy naneho ny sarin'ny webcam i kamoso.
Valiny amin'i ROBOSapiens
Tena tsara ny fampianaranao, misaotra betsaka namana.
Ahoana ny fomba hahatonga ny Kanelina ho toy ny Windows 8